DANI IYO MADOOBE OO KAXUMAADAY INQILAABKII DHICISOOBAY MOGDISHO | ToggaHerer
← Daawo: Askari Ciidamada Komaandawsta Soomliya ah Oo Ka Soo jeeda Beesha Hawiye oo Nidar ku maray in aanuu bixinayn cidii Duulaan ku ah Qaranimada Midawga Musharixiintana u sheegay in aanu Beelnimo ula soo safanayn inta ay Kenya dabda oo Doonaysa Dhulkeenii ay dabada ka wado.
Axmed Mu’min Seed Ma Wasiirka Booyadaha ee Somalilaan baa? →
Dani oo ah madaxweyne aan ladooran balse ku yimid beel iyadu haysatay maamulkaa puntland oo ku kaltanta ayaa isagu sidaa ku ah madaxweyne kaltan waxaa bar bar fadhiya midyaroo wax kabaraanaya oo waayadanba daba socda uun. hayeeshee gabanka madoobe qudhiisu isagaa isku caanashubay oo hada 13 sanadood ayaa haystaa jubaland.labadan nin waxay dagaal kula jiraan dawlada dhexe ee fadaraalka fadhigeeduna yahay Mogdisho. waxay ogaadeen in dalku yeeshay madaxweyne daacad ah siyaasi ah shaqo badan oo shacabka soomaaliyeedna hareero iyo garab taagan yihiin. sidaa daraadeed hadii doorashadii ahayd in shacabku qof iyo cod u dareeraan ee madaxweyne farmaajo keenay la raaco in shacabku markiiba isaga dooranayaan waayo waa la jecelyahay wax muuqda ayuuna qabtay. labadan maamul waxay istuseen in arinkaa laga hortago waxayna ku heshiiyeen in ay diidaan in dadwaynuhu wax doortaan.
marqolo qaraabada ahi wax waydiisay,oo layiri hadaad diidaan in doorasho qof iyo cod ah dalka ka dhacdo sow shacabku idinka hor iman maayo maadaama aad in ay codeeyaan hor istaagteen? waxay ku jawaabeen anagu ma garanayno shacab bisaylkaa leh oo waxaas garan kara haday waxaa fahmayaan yaa ku dhici lahaa doorasho dadban baan rabnaa in uu yiraahdo!! shacabku waa hurdaan tolaay yaa reer hebel ah bas ayaa ku filan. hadaba doorashadii ayrabeen ayaa loo yeelay walina waa diidan yihiin wixii loogu tanaasulay, waxayna doonayeen in ay marwalba xujo cusub keenaan oo aan doorashaba dhicin mid qof iyo cod ah iyo mid dadban labadaba maxaayeelay baydhaheen waxaan ogaanay xataa doorashada dadban farmaajaa soobaxaya. kolkaa sina uulama tartami karo ninkaan waxa inoo furan waa ilameerayso oo kaliya. waa cajiidaynaa si waqtigu u dheeraado loo yiraahdo isagaa diiday doorasho in uu hirgaliyo kadibna beesha caalamkaa eryaysay sidan ayay isku qufuleen oo isu sheegeen. farmaajo lagu dhici waa in la hortago.
waxaajiray qorshe emaraadku maal galiyay iyo kenya oo ahaa xulufada labadan maamul iyo midawga musharixiinta sheekh shariif hogaamiyo iyo xasan sheekh loosoo dhiibay lacagta lagu fulinaayo hawsha waxaa loo soo dhiibay dani waxaana lagu fulinaayay in lagu maal galiyo in qilaab isagoo loo ekaysiinaayo mudaharaad kaasoo mogdisho loogu talagalay.lacagtii dani iyo madoobe xoogaa waa lahareen intii badnayd xasan ayay usoo gudbiyeen.hadafku wuxuu ahaa in dad shacab ah oo dhawr kun ah isu soobaxdo kadibna boqolaal kamid ah la qarxiyo waxna lalaayo oo dad loo diyaariyay sidii dhici jirtayba ay fuliyaan. waxay hadaba dusha canaan uuga tuureen xasan sheekh oo lacagtii ayaa laysku qabsaday oo meesha waa lays khiyaameeyay. emaaraatku lacag xoogleh ayuu ku bixiyay inqilaabkaan,hadaba waxaa labadanin kaxun yihiin in dhimasho iyo dhawaacba jirin xamar! kenya iyo emaraadkuna shakiyeen maadama hawshii sidii larabay aan loo fulin, balantu waxay ahayd in labda maamul heshiiska diidan midawguna rabshado fuliyaan dhiig ku daato si dawlada meesha looga saaro say latahay shisheeyana usoo dhiibay.
hadana waxay wadaan falal amaanka dalka soomaaliya dhanka ah iyo ilameerayso si aan doorashaba u dhicin iyagoo quudaraynaaya in beesha caalamku farmaajo eryi doonto, waxaana wax laga naxa ah niman raba in ay wax ku noqdan dhiig hadayse banaabax xiisaynayaan kismanyo garoowe haka dhigteen maxay xamar uun u beegsanayaan had iyo jeer? waxay u sheegeen dani iyo madoobe saaxibadoodii mogdsiho joogay in ay khlad weyn ahayd waxay sameeyeen wax ay fuliyeen majirto maxaan hada aduunka u sheegnaa iyo saaxiibadeen emaraad iyo kenaya.